प्रिय साथी ! तिमी कसको मान्छे, अनि म कसको मान्छे ?
धेरै बाध्यता अनि थोरै रहरले आज औंला भाँचेर गन्दा पनि घरदेश छोडेर परदेश हिँडेको पनि ८/१० बर्ष भइसकेछ । हिजो गाउँमा हुँदा तिमी र म बस्ने छानो मात्रै फरक थियो । डाँडा-पाखा, उकाली-ओराली, भञ्ज्याङ्ग-चौतारी त्यो बाहेक कति भन्न मिल्ने अनि कति भन्न नमिल्ने धेरै कुरा साझा थिए अर्थात् हाम्रा थिए । यो कुरालाई यहीं छोडौं । अब घरदेश छोडेपछिका कुरा गरौँ ।
जुन दिन जापानले विद्यार्थी भिषाका लागि दिएको अनुमति बोक्यौं अनि एउटा चिलगाडी चढेर जापानको फुकुओका ओर्लियौं त्यो दिनदेखि करिब २ बर्षको भाषा स्कुल नसक्दासम्म हाम्रो बसाई पनिसँगै भयो । घरदेश छोडेर आएका हामी यहाँ तिम्रो भन्नु म अनि मेरो भन्नु तिमि मात्रै थियौं । सँगै सुतेपछि खुट्टा लाग्छ । आगो राम्रो बल्नको लागि कहिलेकाहिँ दुई मुढा ठोस्नुपर्छ । त्यो बाहेक हामीमा आपसी सहयोग र रमाइला क्षण नै बढी छ । म केहि समय बिरामी भएर काममा जान नसक्दा तिमी ‘आराम गर, काम म गरिहाल्छु नि’ भन्थ्यौ । बिरामी हुँदा तिमीले दिएको त्यस्तो सान्त्वना मेरो जीवनकै सबैभन्दा प्रिय अविस्मरणिय र अब कहिल्यै नपाउने सान्त्वना हो । प्रदेशी छोरालाई सायदै यस्तो सान्त्वना मिल्छ ।
समयको चक्रसँगै जो कोहि पनि घुम्नै पर्छ र हामी पनि घुम्यौं । भाषा स्कुल सकेपछि तिम्रो उच्च शिक्षाको रोजाई र मेरो रोजाइ फरक पर्‍यो । शहर एउटै भएपनि हामीले बस्ने धुरी परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। यससँगै तिम्रो परिवारमा पनि सदस्य बढे । अनि मेरोमा पनि । आज हामी दुईजना भएर प्रदेश आएका दुई परिवार गरेर धेरैजना भएका छौं ।
यो बीचमा पनि हाम्रो सम्बन्ध उस्तै छ । आज पनि म सानो या ठुलो समस्या जे परेपनि पहिले तिमीलाई नै भन्छु । सानो दुःख परेपनि, थोरै आँसु बगाउनु परेपनि तिमीसँगै बगाउँछु ।
आजभोलि तिमीले गरेर हिडेको संगत र मैले गर्नु परेको संगत पक्कै पनि कामको हिसाबले, ठामको हिसाबले अनि विविध हिसाबले फरक छ । हामी नेपाली जाति जहाँ पनि समूह बनाएर बस्न रुचाउने, समूह बनाउने क्रममा क्षेत्रगत, जातिगत, पार्टीगत आदि इत्यादि समूहमा विभाजित भएका छौं ।
तिमी हिंड्ने गरेको समूह फरक छ । म हिंडेको समूह फरक छ । तर पनि तिमीलाई भेट्दा, कुरा गर्दा कहिल्यै पनि फरक समूहको जस्तो बास्ना आउँदैन । सायद तिमीलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन होला । तिमीलाई र मलाई फुटाउन यता पनि धेरै कुरा भए होला । त्यता पनि भए होला तर पनि तिमीमा केहि परिवर्तन आएन । अनि ममा पनि । कहिलेकाँही तिम्रो समूहले छोएको हावा पनि विरोधी हुन्छ भने अनि यताको पनि त्यस्तै भने होला । तिमीलाई मेरो मान्छे भनेर हिंड्नेहरु पनि छन् अनि मलाई तिम्रो मान्छेहरु भनेर हिँड्नेहरु पनि छन् ।
मेरो र तिम्रो खासै भेट पनि हुँदैन । किनकि तिमी हिंड्ने संगत र म हिंड्ने संगत फरक छ । तर, मैले दुःख पर्दा पहिले तिमीलाई सम्झिन्छु । तिमीले पनि मलाई सम्झिन्छौं । सानो खुसी बाँड्न पनि पहिले तिमीलाई नै फोन गर्छु । तिमीले पनि मलाई फोन गर्छौ । यतिसम्म आइपुग्दा तिमी र मेरोबीचमा हामीभन्दा नजिकको व्यक्ति अरु कोहि छैनन् ।
अब भन साथी- तिमी कसको मान्छे, अनि म कसको मान्छे !
नैतिक शिक्षा: जापानमा जापानी समाजबाहेक नेपालि समाज पनि छ । यसमा कसरी लाग्ने अनि कति लाग्ने आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैलाई पनि उसले गरेको संगतका आधारमा विश्लेषण नगरौं र अग्रज भन्दैमा जे पनि विश्वास नगरौं ।